FAQs – Advocacy Challenge Fund
FAQs	admin	2016-09-11T07:57:01+00:00
पैरवी चुनौती कोषबारे प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
उन्नतिकार्यक्रमद्वारा स्थापना गरिएको र डेनमार्क सरकार (Denmark Government) को वित्तीय सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (International Labour Organization)द्वारा व्यवस्थापन गरिएको पैरवी चुनौती कोषसम्बन्धी सामान्य प्रश्नहरूका उत्तर यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । यो कार्यक्रम अधिकार तथा व्यवसायिक सुशासन लगायत उत्तरदायी व्यवसाय विकासका लागि पैरवी गर्ने दिशामा लक्षित छ । यसरी नै यो कार्यक्रम पैरवी तथा संवादका लागि क्षमता अभिवृद्धि, दिगोपना प्रवद्र्धन र अधिकार तथा संयुक्त सुशासन लगायत उत्तरदायी व्यवसायको महत्वबारे जनचेतनाको बृहत् सुधारमा केन्द्रित छ । कार्यक्रमलाई पूर्वी नेपालका सात जिल्ला (इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर र सँखुवासभा) मा संचालित छ । कार्यक्रम चार मूल्य शृङ्खला अर्थात् परम्परागत चिया,अदुवा, दुग्ध उत्पादन र अलैँचीमा केन्द्रित हुन्छ । चार मूल्य शृङ्खलामा कार्यरत रोजगारदाता संस्था, वस्तुगत सङ्घ, व्यवसाय सङ्घ, अनुसन्धान संस्था,सरकारीनिकाय,गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्था, समुदायमा आधारित संस्था,बौद्धिक वर्ग, सञ्चारगृह र मजदुर संघ संगठनहरू कार्यक्रमका लक्षित समूह हुन् ।
पैरवी चुनौती कोषबारे
कोष विदेशी मुद्रामा पाइन्छ?	admin	2016-09-11T08:07:47+00:00
कोष विदेशी मुद्रामा पाइन्छ?
विदेशी मुद्रामा पाइन्न । कोष स्थानीय मुद्रा अर्थात् नेपाली रुपियाँमा उपलब्ध गराइन्छ ।
पैरवी चुनौती कोष नगदमा प्रदान गरिन्छ?	admin	2016-09-11T08:08:41+00:00
पैरवी चुनौती कोष नगदमा प्रदान गरिन्छ?
नगदमा प्रदान गरिन्छ । अनुदान पाउने संस्थाको ब्याङ्क खातामार्फत् नगद प्रदान गरिन्छ ।
अनुमोदन प्रक्रिया पूरा हुन कति समय लाग्छ?	admin	2016-09-11T08:09:47+00:00
अनुमोदन प्रक्रिया पूरा हुन कति समय लाग्छ?
अनुमोदन प्रक्रिया पूरा हुन बढीमा तीन महिना लाग्छ ।
राजनीतिक दलहरू र वा तिनका भ्रातृ सङ्गठन पैरवी चुनौती कोषका लागि योग्य छन्?	admin	2016-09-11T08:12:05+00:00
राजनीतिक दलहरू र वा तिनका भ्रातृ सङ्गठन पैरवी चुनौती कोषका लागि योग्य छन्?
योग्य छैनन् । यो कोष राजनीतिक दलहरू र वा तिनका भ्रातृ सङ्गठनका लागि होइन ।
गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्था,निजी क्षेत्र संस्था र सरकारी विषयगत निकायहरू कोषका लागि योग्य छन्?	admin	2016-09-11T08:13:03+00:00
गैरसरकारी संस्था, सहकारी संस्था,निजी क्षेत्र संस्था र सरकारी विषयगत निकायहरू कोषका लागि योग्य छन्?
माथि उल्लेखित सबै संस्था कोषका लागि योग्य छन् ।
अर्को सङ्घ÷संस्थासँग मिलेर संयुक्त आवेदन दिन सम्भव छ?	admin	2016-09-11T08:13:48+00:00
अर्को सङ्घ÷संस्थासँग मिलेर संयुक्त आवेदन दिन सम्भव छ?
सम्भव छ । संयुक्त आवेदन स्वीकार गरिन्छ तर संयुक्त आवेदनका लागि कोषको सीमा भने उही रहन्छ ।
के म एकै समयमा एकभन्दा बढी अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्छु? हाम्रो सङ्घ÷संस्था एक छाता सङ्घ÷संस्थाको सदस्य हो । यस छाता सङ्घ÷संस्थाले पैरवी चुनौती कोषका लागि आवेदन दिँदा हाम्रो सङ्घ÷संस्थाले पनि आवेदन दिन सक्छ?	admin	2016-09-11T08:15:59+00:00
के म एकै समयमा एकभन्दा बढी अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्छु? हाम्रो सङ्घ÷संस्था एक छाता सङ्घ÷संस्थाको सदस्य हो । यस छाता सङ्घ÷संस्थाले पैरवी चुनौती कोषका लागि आवेदन दिँदा हाम्रो सङ्घ÷संस्थाले पनि आवेदन दिन सक्छ?
आवेदन दिन सक्छ । फरक कार्यका लागि हो भने आवेदन दिन तपाईँको सङ्घ÷संस्था पूर्णरूपेण हकदार छ । प्रायः ठूला छाता सङ्घ÷संस्थाले बृहत् सरोकारका विषयलाई हेर्छन् भने तपाईँको सङ्घ÷संस्थाले कुनै कार्यलाई आफ्नै सरोकारका विषयसँग जोडने प्रस्ताव राख्न सक्छ ।
मेरो व्यवसाय भर्खरै सुरु गरेको हो भने वा सुरु गरेको दुई वर्ष पनि भएको छैनभने म आवेदन दिन सक्छु?	admin	2016-09-11T08:16:53+00:00
मेरो व्यवसाय भर्खरै सुरु गरेको हो भने वा सुरु गरेको दुई वर्ष पनि भएको छैनभने म आवेदन दिन सक्छु?
आवेदन दिन सक्नुहुन्छ तर कोष दिनुभन्दा अघि व्यवसाय वा संस्थाले परियोजना जिल्लामा आफ्नो विश्वसनीयता र दृश्यता देखाउनुपर्नेछ ।
मैले आवेदन दिन मेरो संस्था कहाँ अवस्थित हुनुपर्छ र वा दर्ता गरिएको हुनुपर्छ?	admin	2016-09-11T08:17:54+00:00
मैले आवेदन दिन मेरो संस्था कहाँ अवस्थित हुनुपर्छ र वा दर्ता गरिएको हुनुपर्छ?
तपाईँको संस्था सात परियोजना जिल्लामध्ये एक जिल्लामा अवस्थित हुनुपर्छ वा नेपालको पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रमा कार्यरत हुनुपर्छ । तर राष्ट्रिय तहका संस्था वा छाता संस्थाले पनि पैरवी चुनौती कोषका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत कोषका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
मैलै अघिल्लै चरणमा आवेदन बुझाएँ तर छनोट भएन । के म भावी चरणका लागि आफ्नो प्रस्ताव पुनः पेस गर्न सक्छु?	admin	2016-09-11T08:19:53+00:00
मैलै अघिल्लै चरणमा आवेदन बुझाएँ तर छनोट भएन । के म भावी चरणका लागि आफ्नो प्रस्ताव पुनः पेस गर्न सक्छु?
पहिलोपटक पेस गरेपछि पैरवी चुनौती कोष व्यवस्थापन टोलीसँग परामर्श गरी प्रस्ताव परिष्कृत गर्दै तपाईँ पुनः पेस गर्न सक्नुहुन्छ ।
सफल प्रस्तावहरूको छनोट कसरी गरिन्छ?	admin	2016-09-11T08:20:23+00:00
सफल प्रस्तावहरूको छनोट कसरी गरिन्छ?
प्रस्ताव छनोटका मूलभूत आधारलाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । पहिलो आधार विषयवस्तुसँग सम्बद्ध छ भने दोस्रो आधार कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध छ । विषयवस्तुसम्बन्धी आधारमा प्रस्तावको सान्दर्भिकता, नतिजाको गुणस्तर, दिगोपना र नवीनता पर्दछन् र कार्यान्वयनसम्बन्धी आधारमा साझेदारीको गुणस्तर, व्यवस्थापनको गुणस्तर, विधिगत पद्धतिको गुणस्तर र बजेट पर्दछन् ।
तपाईँको निर्देशिकामा उल्लेख भएका सबै सर्त (उद्देश्य, फारम र दिनुपर्ने सूचना) मेरो आवेदनले पूरा गर्छ तर मेरो आवेदन किन छनोट भएन र कोष दिइएन भन्ने कुरा म बुझ्न सक्दिन ।	admin	2016-09-11T08:21:42+00:00
तपाईँको निर्देशिकामा उल्लेख भएका सबै सर्त (उद्देश्य, फारम र दिनुपर्ने सूचना) मेरो आवेदनले पूरा गर्छ तर मेरो आवेदन किन छनोट भएन र कोष दिइएन भन्ने कुरा म बुझ्न सक्दिन ।
तपाईँको आवेदन (अवधारणा–पत्र)ले योग्यताका सबै आधार पूरा गरे पनि छनोटका आधारअनुसार मूल्याङ्कन गर्दा अरू आवेदनहरूलेबढी अङ्क हासिल गरे । तथापि अर्को पटक आवेदन आह्वान गर्दा तपाईँको आवेदन पुनः पेस गर्न सकिनेछ । तपाईँले आफ्नो आवेदन परिष्कृत गर्न पनि सक्नुहुनेछ । छनोट नभएको हरेक आवेदनझैँ तपाईँको आवेदन पनि गोप्य राखिनेछ । पारदर्शिताका लागि र अन्य इच्छुक संस्थाले उदाहरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकून् भन्नाका लागि स्वीकृत कार्य (एक्सन)लाई सार्वजनिक गरिनेछ ।
पैरवी चुनौती कोष व्यवस्थापन टोलीले मेरो आवेदन प्राप्त गरेको छ भनेर मैलै कसरी जानकारी पाउने?	admin	2016-09-11T08:23:15+00:00
पैरवी चुनौती कोष व्यवस्थापन टोलीले मेरो आवेदन प्राप्त गरेको छ भनेर मैलै कसरी जानकारी पाउने?
तपाईँको आवेदन प्राप्त भएपछि पैरवी चुनौती कोषले ईमेलमार्फत् तपाईँलाईजानकारी गराउनेछ ।
आवेदकहरूलेपहिलो चरणमै पूर्ण प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्?	admin	2016-09-11T08:23:52+00:00
आवेदकहरूलेपहिलो चरणमै पूर्ण प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्?
सक्दैनन् । आवेदकहरूले पहिले सम्बन्धित मुुद्दामा अवधारणा–पत्र पेस गर्नुपर्छ । कोष व्यवस्थापकले अवधारणा–पत्र स्वीकार गरेमा पूर्ण प्रस्ताव तयार गर्न आवेदकहरूलाई सम्पर्क गरिनेछ ।
प्रस्ताव तयारीका लागि कोष व्यवस्थापकबाट सहयोग प्राप्त गर्ने कुनै प्रावधान छ कि?	admin	2016-09-11T08:24:39+00:00
प्रस्ताव तयारीका लागि कोष व्यवस्थापकबाट सहयोग प्राप्त गर्ने कुनै प्रावधान छ कि?
प्रावधान छ । अवधारणा–पत्र स्वीकृत भएपछि पूर्ण प्रस्ताव तयार गर्नका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न कोष व्यवस्थापकले सम्बन्धित कर्मचारीलाई अनुरोध गर्नेछ ।
अवधारणा–पत्र टेम्पलेटमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर मैले कहाँ लेख्नुपर्छ?	admin	2016-09-11T08:25:23+00:00
अवधारणा–पत्र टेम्पलेटमा सोधिएका प्रश्नको उत्तर मैले कहाँ लेख्नुपर्छ?
हरेक प्रश्नलगत्तै बक्समा लेख्नुपर्छ । आफ्ना विचार राख्न अवधारणा–पत्र टेम्पलेटमा स्पष्ट सल्लाह दिइएको छ ।
पैरवी चुनौती कोष वेबसाइटमा सीधै अनलाइन आवेदन दिन आवश्यक छ?	admin	2016-09-11T08:43:35+00:00
पैरवी चुनौती कोष वेबसाइटमा सीधै अनलाइन आवेदन दिन आवश्यक छ?
आवश्यक छ । सबै अवधारणा–पत्र पैरवी चुनौती कोष वेबसाइटमार्फत् विद्युतीय माध्यमद्वारा समयसीमाभित्र पेस गरिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त आवेदकहरूले अवधारणा–पत्र फारम डाउनलोड गरी हुलाक वा ईमेलमाफत् पठाउन सक्नेछन् ।
पैरवी चुनौती कोषले व्यवस्था गरेको अवधारणाप–पत्र फारम प्रयोग गर्न अनिवार्य छ?	admin	2016-09-11T08:27:17+00:00
पैरवी चुनौती कोषले व्यवस्था गरेको अवधारणाप–पत्र फारम प्रयोग गर्न अनिवार्य छ?
अनिवार्य छ । लेखाजोखा र छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष एवम् पारदर्शी हुन सकून् भन्नाका लागि प्रदान गरिने सबै सूचनामा फारमले एकरूपता सुनिश्चित गर्छ । तसर्थ सबै इच्छुक आवेदकले अवधारणा–पत्र तथा प्रस्ताव फारम प्रयोग गर्नैपर्छ । आवेदकहरूले अत्यावश्यक ठानेका अतिरिक्त सूचना भने थप्न सक्नेछन् ।
अवधारणा–पत्र नेपाली भाषामा पेस गर्न सकिन्छ?	admin	2016-09-11T08:27:49+00:00
अवधारणा–पत्र नेपाली भाषामा पेस गर्न सकिन्छ?
सकिन्छ । आवेदकहरूले नेपाली भाषामा अवधारणा–पत्र पेस गर्न सक्छन् तर सम्भव भए अङ्ग्रेजीमा पेस गर्न सुझाव दिइन्छ ।
पैरवी चुनौती कोषले केका लागि रकम दिँदैन?	admin	2016-09-11T08:30:48+00:00
पैरवी चुनौती कोषले केका लागि रकम दिँदैन?
दिगोपना भनिने अवसर २ अवसर १ नीतिगत संवादका लागि जनवकालतअन्तर्गत स्वीकृत गरिने पैरवीसम्बन्धी परियोजनाहरूसँगै प्रदान गरिनेछ तर छुट्टाछुट्टै प्रदान गरिनेछैन । सानो प्रतिनिधित्व र सीमित पहुँच क्षमता भएको संस्थाहरूलाई सहयोग गरिनेछैन ।
असान्दर्भिक मुद्दा, सामाजिकर वातावरणमा अपूरणीय नकारात्मक प्रभाव पार्ने परियोजनामा लगानी गरिने छैन ।
मूल्य श्रृङ्खला कोष (Value Chain Fund) र उन्नती कार्यक्रमको वित्तीय कोषका पहुँचसँग अन्य कुराहरूमा लगानी गरिने छैन ।
पैरवी चुनौती कोषमाबुझाइने अवधारणा–पत्र÷प्रस्तावमा किन धेरै प्रश्नहरू सोधिन्छन्?	admin	2016-09-11T08:35:27+00:00
पैरवी चुनौती कोषमाबुझाइने अवधारणा–पत्र÷प्रस्तावमा किन धेरै प्रश्नहरू सोधिन्छन्?
तपाईँको परियोजनालाई बुझ्न र अङ्क प्रदान गर्न अवधारणा–पत्र÷प्रस्तावले यथार्थमा आवश्यक जानकारीका लागि आह्वान गर्छ । अवधारणा–पत्र÷प्रस्तावले सामान्यतः तपाईँको संस्थाको धारणा, कार्य र क्षमताबारे वस्तुगत जानकारी प्रदान गर्न तपाईँलाई सहयोग गर्छ । छनोटको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न यसलाई सर्वोत्तम उपायका रूपमा हेरिन्छ ।
पैरवी चुनौती कोषका लगानी अवसर के–के हुन्?	admin	2016-09-11T08:40:42+00:00
पैरवी चुनौती कोषका लगानी अवसर के–के हुन्?
पैरवी चुनौती कोषका तीनवटा लगानी अवसर छन् र यी अवसर कार्यक्रमले समेटेको सात जिल्लामा उपलब्घ छन् । यी तीन अवसर हुन् (१) नीतिगत संवादका लागि जनवकालत, (२) दिगोपना र (३) जनचेतना ।
थप नयाँ आवेदनहरूका लागि हरेक अवसरले सामान्यतः एकभन्दा बढी लगानी चरण प्रदान गर्नेछ ।
कोष लागू हुने अधिकतम अवधि कति हो?	admin	2016-09-11T08:41:19+00:00
कोष लागू हुने अधिकतम अवधि कति हो?
अधिकतम परियोजना अवधि ११ महिना हो ।
पैरवी चुनौती कोषका लक्षित समूहहरू को हुन्?	admin	2016-09-11T08:34:24+00:00
पैरवी चुनौती कोषका लक्षित समूहहरू को हुन्?
सार्वजनिक र निजी संस्थाहरू सामान्य लक्षित समूह हुन् । यी समूहमा सङ्घ÷ संस्थाहरु, व्यवसायिक सङ्घ÷संस्थाहरु, अनुसन्धान संस्था÷संस्थाहरु, बौद्धिक वर्ग, सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघ÷संस्था, समुदायमा आधारित संस्था, ट्रेड युनियन, रोजगारदाता संस्था र सञ्चारगृहहरू पर्दछन् । चार मूल्य शृङ्खला (परम्परागत चिया, अदुवा, दुग्ध उत्पादन र अलैँची) र नेपाल वाणिज्य तथा उद्योग महासङ्घ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, जिल्ला उद्योग तथा वाणिज्य, उत्पादक तथा वस्तुगत सङ्घ÷संस्थाजस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय व्यवसाय संस्थासँग काम गरिरहेका समूह अन्तिम लक्षित समूह हुनेछन् ।
पैरवी चुनौती कोषले कति रकम प्रदान गर्न सक्छ?	admin	2016-09-11T08:36:53+00:00
पैरवी चुनौती कोषले कति रकम प्रदान गर्न सक्छ?
कार्यक्रमको संख्या जतिसुकै भएपनि हामीेले प्रत्येक आवेदकलाई अधिकतम रकम अमेरिकी डलर एक लाख (१,००,०००÷–) र न्यूनतम रकम अमेरिकी डलर दश हजार (१०,०००÷–) प्रदान गर्न सक्दछौं । त्यसैले आवेदकले अमेरिकी डलर एक लाख (१,००,०००÷–)मा नबढाई आफ्नो आवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।